Su'aalaha in badan lays weydiiyo
Ma tani runtii oo dhan lacag la'aan ah?
Waa maxay sababta aan diiwaan ah?
Sideen ku ogaan karaa iyada oo aan Xayeysiinta?
Sideen u caawin karaa in aad mashruucan?
Waqti intee le'eg bay qaadataa in ay bartaan inay taabtaan-nooca?
Sidee aad ku qiyaastaan ​​ayaa erayo tilmaanta halkii daqiiqo (wpm)?
Maxaan u baahan ahay in la isticmaalo TypingStudy.com?
Marka aan bilaabay casharka, barnaamijka wuxuu muujinayaa in aan si Shift + warqad miiran. Waa maxay sababta in?
Yaa loogu talogalay?
Ma ku haboon dadka qaba culeyska?
1) Hadii aad diiwaan, waxaad heli doontaa macluumaad horumarka wada jir ah ula taariikhda.
2) Waxaad baran karaa iyadoon Xayeysiinta (ka dib sadaqa yare)
Ka dib markii deeq yar waxaan ka saari doonaa Xayeysiinta xisaabtaada. Dulqaad, sababtoo ah waa habka buuga.
1) Ku qor comment ku saabsan waxa aad jeceshahay iyo nacaybka
2) Ku qor ku saabsan fikradaha, sidii loo hagaajin lahaa waxbarashada
3) U sheeg saaxiibadaa nagu saabsan (wadaagaan our website ee shabakadaha bulshada, biiri inagu https://www.facebook.com/TouchTypingStudy)
Loo baahan yahay Inta wakhti ah in ay bartaan si ay u daabacaan-taabto si fiican u xiran tahay shakhsi aad u nisbayn. Sidoo kale waa muhiim in si joogto dhaqmaan. Si aad natiijo wanaagsan aanu kuu soo jeedinaynaa in aad qaadato 1 casharka maalintii.
Xusuusnow, iyagoo og meesha xarfaha oo dhan ay yihiin kuwo kama dhigna in aad diyaar u garaacaya ereyada dhakhso ah. Farahaaga u baahan yihiin si ay u horumariyaan hababkii hore ee dhaqdhaqaaqa ama loogu yeedho 'xasuusta dhaqdhaqaaqa muruqa' ee meesha muhiimka ah kasta oo gaar ah waxa uu ku yaalaa, isagoo aan ka fikirin furayaasha ku saabsan ama eegaya keyboard ah. Dhaqdhaqaaqa Automatic waxa kaliya ee soosaaray celcelin badan. Xusuusnow - dhaqanka kaliya ka dhigaysa mid kaamil ah!
Si loo qiyaaso WPM, barnaamijka ku tiriyaa sida badan erayadii aad qoraal ah daqiiqaddiiba. 1 erayada = 5 characters, oo ay ku jiraan boos iyo xarakaynta.
Laga soo bilaabo dhinaca farsamo ee aad u baahan tahay oo kaliya internet-ka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale u baahan dhiirogelin iyo rabitaankooda in ay horumariso aqoontaada makiinada taabto.
Fadlan, hubi in u saftay Lock ma aha marka aad bilowdo makiinada. Haddii Koofiyadaha Lock ku saabsan yahay, barnaamijka weydiiyo in riix furaha weydiiyay + wareejin isku mar.
Makiinada Study waxaa loogu talagalay qof walba oo doonaya in uu horumariyo xirfadihiisa ama makiinada taabto. Makiinada Touch waa xirfad u leh oo awood u qofka inuu ku qor, iyada oo eegaya keyboard si aad u ogaato xukunka saxda ah.
Haa, makiinada Study waa sidoo kale ku haboon dadka qaba dyslexia. Iyada oo la taabto xirfad makiinada dadka waxay leeyihiin dan u ah in tiro ka mid ah meelaha sida aan xirfadaha makiinada taabto. Sida qaar ka mid ah dadka qaba culeyska dhibaatada ka qaba far, labada eegaysana xawaaraha iyo eegidda ah, shaqo makiinad Sidaa darteed waxay noqonayaan kuwo ku haboon.